ဖေဖေစည်ဖြိုး စာဖတ်ပြနေတာကို နားလည်သလိုလိုလေးလုပ်ပြနေတဲ့ သမီးလေးရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရင်းချစ်မ၀ဖြစ်နေတဲ့ ခင်လွှမ်း – Cele Snap
ဖေဖေစည်ဖြိုး စာဖတ်ပြနေတာကို နားလည်သလိုလိုလေးလုပ်ပြနေတဲ့ သမီးလေးရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရင်းချစ်မ၀ဖြစ်နေတဲ့ ခင်လွှမ်း
November 16, 2021 By Ju Ry Celebrity
အနုပညာလောကမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် ရပ်တည်အောင်မြင်နေပြီး ပရိသတ်အားပေးမှုကို အခိုင်အမာ ရရှိထားတဲ့ သရုပ်ဆောင် စည်ဖြိုးကိုသိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ ဒါ့အပြင် ကြည်နူးပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားကာ ပရိသတ်ေ တွအားကျနေရတာပါနော်။သူတို့ဇနီးမောင်နှံက ဝါသနာပါရာ အနုပညာအလုပ်တွေကို အတူတူ ကြိုးစားလုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ အနုပညာရှင်တွေ လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်တွေကလည်း သူတို့ဇနီးမောင်နှံကို အားကျချစ်ခင်နေရတာပါနော်။ စည်ဖြိုးကလည်း ဇနီးဖြစ်သူခင်လွှ မ်းကိုကြင်နာမှုတွေအပြည့်အဝပေးကာ မျက်စိအောက်ကအပျောက်မခံအောင် ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေပေးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ် ။ အခုဆိုရင် ချစ်စရာ သမီးလေးကို
ပိုင်ဆိုင်ထားရလို့ ပိုလို့တောင်ပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေကြတာပါ ။ သမီးလေးရဲ့ ပုံလေးတွေကိုလည်း အမြဲဖော်ပြပေးလေ့ရှိပါတယ်နော်။ ဒီနေ့မှာလည်း ခင်ပွန်းဖြစ်သူ စည်ဖြိုးက သမီးလေးကို စာဖတ်ပြနေတာကို သမီးလေးက နားလည်သလိုလေး ကြည့်နေတဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့သမီးလေးရဲ့ ဗီဒီယိုကိုတင်ပေးလာတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်.
ပရိသတ်ကြီးလည်း စည်ဖြိုးတို့ သားအဖ ရဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို ကြည့်ပြီးအားပေးစကားလေး ရေးပေးစကားလေး ရေးပေးသွားကြပါအုံးနော်..
အနုပညာလောကမှာ နှဈပေါငျးမြားစှာတိုငျအောငျ ရပျတညျအောငျမွငျနပွေီး ပရိသတျအားပေးမှုကို အခိုငျအမာ ရရှိထားတဲ့ သရုပျဆောငျ စညျဖွိုးကိုသိကွမယျထငျပါတယျနျော။ ဒါ့အပွငျ ကွညျနူးပြျောရှငျစရာကောငျးတဲ့ အိမျထောငျရေးလေးကို ပိုငျဆိုငျထားကာ ပရိသတျေ တှအားကနြရေတာပါနျော။သူတို့ဇနီးမောငျနှံက ဝါသနာပါရာ အနုပညာအလုပျတှကေို အတူတူ ကွိုးစားလုပျကိုငျနကွေတဲ့ အနုပညာရှငျတှေ လညျး ဖွဈပါတယျ။
ပရိသတျတှကေလညျး သူတို့ဇနီးမောငျနှံကို အားကခြဈြခငျနရေတာပါနျော။ စညျဖွိုးကလညျး ဇနီးဖွဈသူခငျလှ မျးကိုကွငျနာမှုတှအေပွညျ့အဝပေးကာ မကျြစိအောကျကအပြောကျမခံအောငျ ခဈြခွငျးမတ်ေတာတှပေေးထားတာလညျးဖွဈပါတယျ ။ အခုဆိုရငျ ခဈြစရာ သမီးလေးကို
ပိုငျဆိုငျထားရလို့ ပိုလို့တောငျပြျောရှငျကွညျနူးနကွေတာပါ ။ သမီးလေးရဲ့ ပုံလေးတှကေိုလညျး အမွဲဖျောပွပေးလရှေိ့ပါတယျနျော။ ဒီနမှေ့ာလညျး ခငျပှနျးဖွဈသူ စညျဖွိုးက သမီးလေးကို စာဖတျပွနတောကို သမီးလေးက နားလညျသလိုလေး ကွညျ့နတေဲ့ ခဈြစရာကောငျးတဲ့သမီးလေးရဲ့ ဗီဒီယိုကိုတငျပေးလာတာ ဖွဈပါတယျနျော.
ပရိသတျကွီးလညျး စညျဖွိုးတို့ သားအဖ ရဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို ကွညျ့ပွီးအားပေးစကားလေး ရေးပေးစကားလေး ရေးပေးသှားကွပါအုံးနျော..
ပိုက်ဆံရှိတဲ့အသိုင်းအဝိုင်းကလူနဲ့ချစ်ကြိုက်မိရင် ဝေဖန်ကဲ့ရဲ့တတ်ကြတဲ့ဒီနိုင်ငံကလူတွေရဲ့အကြောင်း ရေးသားရင်ဖွင့်လာခဲ့တဲ့ မြတ်သူသူ
ချစ်သူမောင်းတဲ့ကားကို ဇိမ်ကျကျထိုင်စီးနေကြောင်း ဗီဒီယိုလေးရိုက်ရင်း ချစ်သူလေးကို ထုတ်ကြွားလာတဲ့ နန်းစုရတီစိုး